Itoobiya Oo Qunsul U Soo Magacaabatay Dowlad Goboleedka Puntland – Great Banaadir
Dowladda Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in qunsul cusub ay u soo magacaabatay xafiiska ay ku leedahay Magaalada Garoowe ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Puntland, iyada uu maantadana uu ka shaqo bilaabay.
Qunsulka cusub waxaa lagu magacaabaa Degnachew Yitbarek, wuxuuna maanta booqasho ku tegay Xarunta Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Puntland ee Magaalada Garoowe, isaga oo kulana la yeeshay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Qoraal kasoo baxayna, Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Puntland, waxaa lagu sheegay in Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland uu Qasriga Madaxtooyada Garoowe uu ku qaabilay Qunsulka Cusub ee Itoobiya (Ethiopia), Mr Degnachew Yitbarek.
Dowlad Goboleedka Puntland waxaa ay xiriir toos la leedahay Jamhuuriyadda Demoqaraadiga Federaalka ee Itoobiya (Federal Democratic Republic of Ethiopia), wuxuuna xiriirkaasi ku saabsan yahay dhinaca amniga, ganacsiga, iwm.
Waxaa kale oo jirto in Shirkadda Diyaarada Itoobiya (Ethiopian Airlines) ay duulimaadyo toos ah ay ku timaado Degaannada Dowlad Goboleedka Puntland.
Xigasho: Bogagga Wararka Soomaalida